Wareysigaaga gaarka ah ee CGRS | Fedasil info - informatieplatform voor asielzoekers in België
Magangelyada iyo habraaca
Wareysigaaga gaarka ah ee CGRS
Inta lagu jiro wareysiga gaarka ah, waxaad sharaxeysaa sababta aad uga soo tagtay wadankaaga asalka ah.
Fiidiyaha: u diyaargarowga wareysiga labaad
Wareysiga ee CGRS (CGRA/CGVS) ayaa ah tallaabo aad muhiim u ah hab raacaaga ee magangalyada caalamiga ah. Inta lagu jiro wareysiga, waxaad si faahfaahsan u sharaxeysaa sababta aad wadanka uga soo tagtay iyo sababta aad uga codsaneysid magangalyo Belgium. Waa muhiim inaad runta sheegtid!
Sida si wanaagsan loogu diyaar garoobo wareysigaan?
Waxaan kugula talineynaa inaad diyaarisid wareysigaaga, oo ay la jiraan caawinta qareenkaaga, shaqaalahaaga bulshada, ama ururka. Diyaari dhammaan dokumintiyada loo isticmaali karo cadeyn ahaan.
Inta lagu jiro wareysiga, sarkaalka CGRS ayaa ku weydiinayo su’aalo. Wareysiga ayaa socon karo dhoor saacadood.
Fiidiyaha: wareysiga labaad
Waa inaad sheegtaa runta oo aad sameysaa wax walba ee awoodid ee aad ku cadeysid aqoonsigaaga, asalkaaga, iyo safarkaaga ku aadan Belgium.
Haddii aad siisay warbixin been ah oo heer walba ee hab raaca (tusaale ahaan ku saabsan aqoonsigaaga ama taariiqdaada), waxaa weli jiro waqti aad ku sheegtid runta inta lagu jiro wareysiga. Waa danahaaga.
Haddii aad heshid dokumintiyo oo aanan weli ku jirin wargelintaada, waxaad u soo gudbin kartaa CGRS ama ula imaw wareysiga.
Haddii ay muhiim tahay, turjubaan ayaa fasirayo su'aalaha sarkaalka CGRS. Isgaa ama iyada ayaa sidoo kale fasirayo jawaabahaaga. Turjubaanka waxaa magacaabay CGRS oo waa inuu ixtiraamaa sirta wareysigaan.
Haddii, wareysigaan kadib, CGRS (CGRA/CGVS) ayaa u baahan inuu ku su’aalo markale, wuxuu kuu soo dirayaa casuumaad cusub.
Sarkaalka CGRS ayaa qoraalo ka qaadanayo adiga oo hadlayo. Waxaad xaq u leedahay inaad heshid koobiga qoraaladaan, si aad ula hubisid qareenkaaga si aad u aragtid haddii waxa la qoray ay sax tahay.
Waxaad ku soo diri kartaa hadalkaaga CGRS. Weydii talo qareenkaaga.
Warbixin dheeraad ah?
Wareysiga CGRS: tallaabooyinka fayraska korona Ma qabtaa dhibaatooyin caafimaad? www.asyluminbelgium.be: wareysiga labaad